Somali ku sii jeeday Koonfur Afrika oo lagu xiray Garoonka Wilson Airport ee Nairobi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Somali ku sii jeeday Koonfur Afrika oo lagu xiray Garoonka Wilson Airport ee Nairobi.
On Mar 14, 2016 Last updated Mar 14, 2016
Ilaa Afar dhallinyarro Somali ah ayaa lagu xiray Garoonka Diyaaradaha ee Wilsan Airport ee magaalladda Nairobi, kadib, markii laga shakiyey.
Dhallinyaradaasi oo shalay ka ambabaxay magaalladda Muqdisho, ayaa la sheegay inay doonayeen inay dalka Kenya kaga sii sii gudbaan dalka Koonfurta Afrika oo ay Soomaali badan ka xoogsadaan.
Warar Loo-qaateen ah ayaa sheegay in Dhallinyaradaasi la qabtay, kadib, markii Mukhalasiinta waday Dhallinyaradda iyo Saraakiisha Boliska isku maandhaafeen kharaj Khidmo ah oo “Hawl-fududeyn ah” oo la siin jirey hadba Askarta lala macaamiltamo, waxayna taasi oo keentay in Dhallinyaradda lagu xayiro gudaha Garoonka Wilson Airport.
Ilo-wareed ku dhowdhow Ciiddanka Ammaanka ee Kenya ayaa sheegay inaan Dhallinyaradaasi wax dembi ah lagu helin, isla markaana ay maalmaha soo socdo dib loogu soo celin doono magaalladda Muqdisho oo ay markii hore ka soo dhoofeen.
Ma aha markii ugu horreysay oo Dhallinyarro Transit ku sii ah Garoonka Diyaaradaha ee Nairobi lagu xayiro Garoonka, iyadoo aysan jirin sababo cad oo loogu diiday inay ka sii dhoofaan Nairobi.
Labo isbuuc ka hor, Tobaneeyo Dhallinyarro Soomaali oo ku sii jeeday caasimadda dalka Sudan ee Khartoum ayaa lagu xayiray Garoonka Diyaaradaha ee Nairobi, iyadoo ay Dhallinyaradaasi u dhamaystirnaayeen dhamaan Dukumentiyadda muhiimka u ah Dhoofka, sida Fiisaha Dal-ku-galka iyo Tikidhada.
Physically challenged Somali rewarded for his outstanding activism
Ciidamada Jabuuti oo Weeraray Markab laga leeyahay Masar